Afar koox oo u gudbay semifinal-ka Horyaalka Basketball Africa League - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Afar koox oo u gudbay semifinal-ka Horyaalka Basketball Africa League
Afar koox ayaa u gudubtay wareegga afar dhammaadka ee horyaalka kubadda kolayga Afrika ee Basketball Africa League (BAL), kaasi oo ka socda magaalada Kigali ee caasimadda dalka Rwanda.
Kooxda horyaalka Marti-gelineysa ee Patriots BBC ayaa guul dirqi ah ka gaartay kooxda Ferroviario de Maputo ee dalka Mozambique, ayada oo kaga adkaatay dhibco ah 73-71.
Guusha Patriots BC ayaa waxaa xooggeeda horseeday Kenneth Gasana iyo Aristide Mugabe. Gasana ayaa dhaliyey 23 dhibcood, halka Mugabe oo ah kabtanka kooxda uu ku daray 18 dhibcood oo kale.
Dhinaca kale kooxda US Monsatir ee dalka Tunisia ayaa 86-62 kaga adkaatay AS Douanes Khamiistii, ayada oo noqotay kooxdii saddexaad ee u gudubta semi-finalka.
Majoc James ayaa dhibcaha ugu badan u dhaliyey kooxda US Monsatir oo ahaa 17 dhibcood. Kooxda Reer Tunis ayaa adkaatay dhammaan kulamadii ay cayaartay oo ahaa afar kulan.
Waxaa horey Semifinal-ka ugu gudbay Kooxda Zamalek ee dalka Masar iyo Clube Atltico Petroleos de Luanda ee dalka Angola
Dhinaca kale, kooxda Clube Atltico Petroleos de Luanda ee dalka Angola ayaa 79-72 kaga adkaatay kooxda Association Sportive de Sal ee dalka Morocco.
Previous articleImtixaanka Shahaadiga ee Dugsiga Sare oo ka bilaawday Muqdisho & Gobolada
Kulamadii ugu dambeeyay ee Premier League oo maanta dhacaya
Paul Pogba iyo Amad Diallo oo taageero u muujiyay Falastiiniyiinta